Seaside retreat eduze nolwandle olunesihlabathi. Izilwane ezifuywayo ziyakhululeka.
I-Star of the Sea ihlomele ukubaleka umahamba-nendlwana wamaholide - uhambo olufushane nje oluya emabhishi anesihlabathi.
Endaweni ephumulele ephethwe umndeni enamadada, onogwaja, isitolo sayo - iyindawo ekahle yeNorfolk Lavender Farm, royal Sandringham House, Park Farm deer park, ukubuka izinyoni kanye nokuhamba ngomkhumbi eSnettisham.
I-Star of the Sea inepulani elivulekile ngaphakathi elinekhishi, izihlalo ezithokomele, indawo yokudlela, eyodwa kabili, imibhede emibili emincane eyodwa kanye negumbi lokugeza.
Ikharavani icwebezeliswe kabili.
Inomlilo wegesi endaweni okuhlala kuyo enkulu, ama-heater kagesi ama-2, irediyetha engu-1 egcwele uwoyela.
4.80 ·64 okushiwo abanye
4.80 · 64 okushiwo abanye
I-Star of the Sea caravan isendaweni enotshani ebiqhutshwa umndeni ofanayo iminyaka eminingi. Awekho ama-clubhouse anomsindo noma izindawo zokudlala zezingane. Izinyoni ezifudukayo zindiza phezulu ziye endaweni yokulondoloza i-RSPB e-Snettisham.
Nokho, uma udinga noma yiluphi usizo ngingatholakala ngocingo noma nge-imeyili.